Vectr: Yemahara Imwe nzira kune Adobe Illustrator | Martech Zone
Vectr: Yemahara Imwe nzira kune Adobe Illustrator
Vectr yakasununguka uye inonzwisisika vector mifananidzo yemhariri app yewebhu uye desktop. Vectr ine yakadzika kwazvo yekufunda curve inoita graphic dhizaini iwanikwe kune chero munhu. Vectr anogara akasununguka zvachose pasina tambo dzakabatanidzwa.
Ndeupi musiyano uripo pakati peVector neRaster Graphics?
Vector-yakavakirwa mifananidzo inogadzirwa nemitsetse uye nzira dzekugadzira mufananidzo. Vane poindi yekutangira, poindi yekupedzisira, uye mitsara pakati. Ivo vanogona zvakare kugadzira zvinhu izvo zvakazadzwa. Iko kunakirwa kweiyo vector chifananidzo ndechekuti inogona kudzoreredzwa asi ichichengetedza kutendeka kwechinhu chepakutanga. Raster-yakavakirwa mifananidzo inoumbwa nemapikisesi pane mamwe marongero. Paunowedzera chifananidzo che raster kubva dhizaini yayo yekutanga, mapikisheni anokanganiswa.
Funga nezve katatu nekapikicha. Triangle inogona kuve nemapoinzi matatu, mitsara pakati, uye izadzwe neruvara. Sezvo iwe paunowedzera katatu kuita zvakapetwa kaviri saizi, iwe uri kungo fambisa iwo matatu mapoinzi kuenda kumberi. Iko hakuna kumonyaniswa chero. Zvino wedzera mufananidzo wemunhu kusvika pahukuru hwayo kaviri. Iwe unozoona iyo foto ichave isina kujeka uye inokanganiswa sezvo iyo diki diki inowedzerwa kufukidza mamwe mapikisheni.
Ichi ndicho chikonzero madhirama nemalogo ayo anoda kugadziridzwa zvine mutsindo anowanzo kuve vector-based. Uye ndosaka tichiwanzoda yakakura kwazvo raster-yakavakirwa mifananidzo kana uchishanda pawebhu… kuitira kuti vangodzikiswa muhukuru panenge paine kushomeka kushoma.
Vectr inowanikwa online kana unogona kurodha kunyorera OSX, Windows, Chromebook, kana Linux. Ivo vane akapfuma seti ye maficha mumugwagwa wavo izvo zvinogona kunyatsoita kuti ive imwe nzira inoshanda kune Adobe Illustrator, kusanganisira yakadzamidzirwa vhezheni dzinogona kuverengerwa muInternet editors.
Edza Vectr Izvozvi!
Tags: bit mepurasterraster maringe ne vectorvectorvector mifananidzo yemharirivector maringe nerastervector-based giraidhi mupepetivectr
Vhidhiyo Yekushambadzira Statistics Yaungangodaro Iwe Usina Kuziva!